Akwukwo Igbo (1984-2021)
Ihe a bụ ọ́bá akwụkwọ e ji eme nchọnchọ. O nwere akwụkwọ dị iche iche Ndịàmà Jehova bipụtara n'ọtụtụ asụsụ.
Ị̀ chọọ ịdanlodu ihe, biko, gaa na jw.org.
Tọzdee, Mee 6
Jezuo ozi gị.—2 Tim. 4:5.
Otu ụzọ anyị si ejezukwu ozi anyị bụ ime ka otú anyị si ezi ozi ọma na-aka mma. (Ilu 1:5; 1 Tim. 4:13, 15) Ọ bụ ezigbo ihe ùgwù na Jehova kwere ka anyị na ya “na-arụkọ ọrụ.” (1 Kọr. 3:9) Ọ bụrụ na ị “chọpụta ihe ndị ka mkpa” ma lekwasị anya n’ozi gị, ị ga-eji “ọṅụ jeere Jehova ozi.” (Fil. 1:10; Ọma 100:2) Ebe ị bụ onyeozi Chineke, obi kwesịrị isi gị ike na ọ ga-enye gị ike ị ga-eji ejezu ozi gị n’agbanyeghị nsogbu nwere ike ịbịara gị. (2 Kọr. 4:1, 7; 6:4) Ma ọnọdụ gị ò kwere gị jiri oge buru ibu na-eje ozi ọma ma ọ bụ na o kweghị gị, ị “ga-enwe aṅụrị” ma ọ bụrụ na i jiri obi gị niile na-eje ozi gị. (Gal. 6:4) Ọ bụrụ na i jezuo ozi gị, o gosiri na ị hụrụ Jehova na ndị mmadụ ibe gị n’anya. Ọ bụrụ na i mee otú ahụ, “ị ga-azọpụta onwe gị, zọpụtakwa ndị na-ege gị ntị.”—1 Tim. 4:16. w19.04 6 ¶15; 7 ¶17
Inyocha Akwụkwọ Nsọ Kwa Ụbọchị—2021
Fraịdee, Mee 7
Setan . . . na-eduhie elu ụwa dum mmadụ bi.—Mkpu. 12:9.
Otu ụzọ gbara ọkpụrụkpụ Setan na ndị mmụọ ọjọọ na-esi eduhie ndị mmadụ bụ mgbaasị. Ndị na-eme mgbaasị na-ekwu na ha ma ihe ụmụ mmadụ na-enweghị ike ịma ma ọ bụ na-eme ihe ndị mmadụ na-enweghị ike ime. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ n’ime ha na-ekwu na ha nwere ike iji ịgba afa ma ọ bụ ịgụ kpakpando mata ihe ga-eme n’ọdịnihu. Ndị ọzọ nwere ike ime ka o yie ka hà na-agwa ndị nwụrụ anwụ okwu. Ụfọdụ na-ata amusu ma ọ bụ na-eme majik. Ha nwekwara ike ịgbalị ka ha kụọ mmadụ ọgwụ. Mgbe a gbara ndị mmadụ si ná mba iri na asatọ na Latịn Amerịka nakwa na Karịbian ajụjụ ọnụ iji chọpụta ma hà kweere na majik, ịta amusu ma ọ bụ ịgba afa, ihe dị ka otu onye n’ime mmadụ atọ ọ bụla kwuru na ha kweere na ha. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụkwa ọnụ ọgụgụ a kweere na mmadụ na ndị mmụọ nwere ike imekọ ihe. A gbakwara ndị si ná mba iri na asatọ n’Afrịka ajụjụ ọnụ. Ihe karịrị ọkara n’ime ha kwuru na ha kweere na e nwere amusu. N’agbanyeghị ebe anyị bi, anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara itinye aka na mgbaasị. w19.04 20-21 ¶3-4
Satọdee, Mee 8
Ka e wee ghara inwe onye ọ bụla nke na-akwa iko [n’etiti unu].—Hib. 12:16.
Jehova Chineke kpọrọ ụdị mmebi iwu niile asị. (Ọma 5:4-6) Ọ kpọrọ imetọ ụmụaka asị nke ukwuu n’ihi na ọ bụ mmehie jọgburu onwe ya. Ebe anyị bụ Ndịàmà Jehova, anyị weere imetọ ụmụaka ka ihe arụ, anyị anaghịkwa agbachi nkiti ma nwanna mee ya. (Rom 12:9) Imetọ ụmụaka n’ụdị ya ọ bụla, megidere “iwu nke Kraịst.” (Gal. 6:2) Ihe niile Jizọs si n’okwu ya nakwa n’ihe ndị o mere kụzie, dabeere n’ịhụnanya, ha na-emekwa ka a na-ekpe ikpe ziri ezi. Ebe ezigbo Ndị Kraịst na-edebe iwu a, ha na-emeso ụmụaka ihe n’ụzọ na-eme ka ahụ́ ruo ha ala, ha amarakwa na a hụrụ ha n’anya n’eziokwu. Ma, mmadụ imetọ ụmụaka na-egosi na onye ahụ na-eche naanị banyere onwe ya, bụrụkwa omume jọgburu onwe ya. Ọ na-eme ka ahụ́ ghara iru nwatakịrị ala, meekwa ka ọ na-eche na a hụghị ya n’anya. Ọ dị mwute ikwu na e nweekwala ụmụnna omume ọjọọ a kpara aka ọjọọ. Gịnị mere o ji dị otú a? Ọ bụ n’ihi na “ndị ajọ mmadụ na ndị nduhie” na-adịkwu ọtụtụ, ụfọdụ n’ime ha nwekwara ike ịchọ ịbata n’ọgbakọ. (2 Tim. 3:13) Ihe ọzọ bụ na ụfọdụ ndị sịrị na ha bụ ụmụnna emetọọla ụmụaka iji mee ihe na-agụ anụ ahụ́ ha agụụ. w19.05 8 ¶1-3
Ziga ya na iimel